တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: မွေးရပ်မြေသို့ အလည်တခေါက်
Posted by Philip Shield at 11:46 PM
ရွှေပြည်ရန်အောင်ထဲမှာဗျ ... အလည်ပြန်ချင်လိုက်တာ
လွမ်းလိုက်တာ မုန့် ပစ်စလက် (မုန့် ပျားသလက်) အဖြူရောင် ပဲပြုတ်နဲ့ စားတာ ချက်စားလိုက်အုန်းမယ် အခု
ဘယ်လင်တိုင်းနေ့အမှီသရဖူဆောင်းပေးရအောင် လား
so gald u are enjoying during ur visit!
its sad that we have to leave our motherland..in search of work, study,$!
thanks for the pix uploaded!
so glad to see pix of those goodie food!too bad ..it will be long before i can get to taste them..or to step on the land of our golden land!
ဘလော့ဆိုတာအစ်ကို့ဆီကနေ စမြင်ဖူးတာပါ။မကြာခဏလည်းဝင်လာဖတ်ဖြစ်တယ်။ သြဂုတ် ၂၀၀၇ လောက်ကစဖတ်တာပါ။ စီဘောက်စ်တင်မထားတော့ ရေးချင်တာအလွယ်တကူမရေးခဲ့၇ဘူး..ကွန်းမန့်ပဲဝင်ထားခဲ့တယ်။ အသစ်တွေရေးပါဦး။
ဒီပိုစ့်က ပုံတွေကြည့်ပြီး မုန့် ပျားသလက် အဖြူ စားချင်သွားတယ်။ အဲ့လို ပဲပြုတ်နဲ့ ဟာကို ဆားနဲ့ ဆီနဲ့သုတ်ပြီး စားရင် အရမ်းစားလို့ ကောင်းတယ်။ ဒါမျိုး မစားရတာ ၈ နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။ ခရမ်းချဉ်သီးထောင်းတော့ မစားဖူးဘူး။ ရေမုန့် ပုံကလည်း စားချင်စရာပဲ။